USA: Manambady noho ny Fitiavana sy ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2009 18:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, srpski, македонски, 日本語, English
Na ny fitiavana, na ny fahazoan-dalana (visa), tsy moramora ny fanapahan-kevitra ny hivady. Ao Etazonia izay isian’ny olona mpifindra monina “Tsy ara-dalana” miisa 12 000 000, dia ny miraiki-pitia sy ny manambady Amerikana no lalana iray ahafahana ho ara-dalana.
Araka ny Fiadidiana Amerikana momba ny fiarovana ny firenena dia olona miisa 1052 415 no nahazo“taratasy ara-dalana” tao Etazonia tamin’ny taona 2007. Tamin’ireo isa ireo dia ny 274 358 no nahazo izany tamin’ny alalan’ny fanambadiana olom-pirenena Amerikana.
Ao amin'ny vohikalan'ny vondrona manohitra ny fifindra-monina Foibe manadihady ny fifindra-monina no manontany i David Seminara hoe firy amin'ireo fanambadiana ireto no ntena fitiavana,, ary asongadiny ny taratasim-pangataham-bady, ireo fanambadiana amboarina ary noho ny vola.
Mpifindra monina mpitoraka blaogy maro no maneho ny eritreritr’izy ireo momba ny fanambadiana sy ny antontan-kevitra ao Etazonia.
Fanambadiana tsy nifanarahana.
Manoratra I El Random Hero avy any California fa amin’ny maha mpifindra monina tsy manan-taratasy ara-dalana azy dia nomen’ny namany sy ny fianakaviana hevitra ny fanambadiana ho safidy iray, kanefa hitany fa tafahoatra loatra ny toro-hevitra:
“zavatra sarotra indrindra ny manatanteraka izany eo amin’ny tenako manokana. Amin’ny maha tsy ara-dalana ahy eto amin’ny firenena dia mahatsapa aho fa vesatra tsy maintsy ho zakaiko irery izany. Marina fa maro ny namana no mananihany sy manoro hevitra ahy fa mivady amina vehivavy Amerikana fotsiny dia ny antontan-taratasy 9-11 no hanova ny fiaianako manontolo ary ny vokatr’izany dia mbola tsapa misodisody eny rehetra eny izany. Raha ny hampaka-bady aloha dia tsy safidy azo antoka satria ny sampan-draharaha fifindra-monina dia efa nanomboka miala sy mitory ireo olona tafiditra anaty fanambadiana mahazo ny karatra maitso (green card). Avy eo mitranga ny fisainana mizarazara eo amin’ity raharaha masina ity dia ny fanambadiana izany, ka ny vokany dia eny an-tsapanan-dalana aho sisa no tavela.”
Niresaka ny vaovan-gazety momba an’I Julia sy Gustavo ny mpitoraka bolongana hafa, Damn Mexicans, mpianadahy anankiroa 11 sy 18 taona no tonga tao Etazoania. Nanambady olom-pirenena Amerikana I Gustavo, fa I Julia kosa nijanona ho tsy nisy taratasy ara-dalana raha niezaka ny handrato fianarana eny amin’ny anjerimanontolo izy.
“… betsaka ny olona no milaza fa mora ny manambady olom-pirenena Amerikana. Mbola tsy nanana izany sipa izany mihintsy I Julia. Raha haverina ny lasa ary ezahana ny mitadidy hoe iza ary no niarahanao tamin’ny ianao 18 taona. Eritrereto hoe raha ianao no nanambady io olona io tamin’izany. Mampangovitra . Ny ankamaroantsika, dia miheritreritra hoe mampatahotra izany. Tanora loatra izany 18 taona izany raha handeha hanambady nefa anie tanora loatra ihany koa I Gustavo raha nandeha nanambady teo amin’ny faha 21 taonany izy e, fa saingy voatery izy niditra tamin’izany noho zava-misy taminy.
“Lamban’akoho ka faty no hisarahana”
Araka ny vaomiera manohitra ny fampodiana ny vady mananotena , dia matahotra ny fampodiana azy ireo ny olona sasany raha sanatria ka maty ilay rangahy na ilay ramatoa vadiny “ara-dalana”.
“Satria noho ny lalana misy, dia miatrika fanakanana sy fampitahorana fampodiana ny vadina olom-pirenena Amerikana raha sanatria maty ny vadiny mandritra ny fotoana fetran'ny karatra maitso (la carte verte). Mihoatra ny valopolo aminin'ny zato ny tranga misy eo amin'ny firenena izay mihatra amin'ny vehivavy, reny ary ny ankizy.”
Miresaka tarehi-javatra iray ny mpitoraka Blaogy My life izay mpivahiny antsokosoko
“Dahianna Heard, vady navelan’I Jeffrey Heard izay maty voatifitry ny miaramila teo amin’ny lohany rehefa nanatitra fitaovana ho an’ny tafika Amerikana tao Iraka izy tamin’ny Marsa 2006. Mety ho am-podiana I Dahianna Heard manana ny zom-pirenena Venezoela izay mipetra ao Florida, na dia hoe efa nangataka ny taratasy makasika ny fahazoan-dalana manorim-ponenana aza izy sy rangahy vadiny ary efa niandry ny fahavitan’izany taratasy izany. Nanana zanaka lahy manana ny zom-pirenena Amerikana izy roa kanefa ny ho aviny rehetra dia tsy fantatra raha toa ka ho ampodiana ny reniny.”
Manoratra ny mpitoraka blaogy fa efa nisedra ny “sakatsakana” rehetra izy mba ahazoany ny zom-pirenena ary mahatsapa hoe inona avy ny sedra mahazo ireo mpanambady.
“Sarotra ny mifindra monina any amin’ny firenena hafa, mila ny fahazarana lehibe izany. Ary rehefa vitanao ny manao io toerana io ho toy ny “ny any aminay” dia tsy lasa ho fonenao intsony ilay firenenao teo aloha. Tsy azoko eritreretina ny fisarahana amin’ny vadiko dia ny manaraka ny tranoko.”
Nofy tsy tanteraka, mahery fo.
Mizaka zom-pirenena Amerikana I Amy monina ao Chicago, Illinois raha toa ka monina any Monterrey, Mexico ankehitriny ny rangahy vadiny Carlos izay mpifindra monina tsy ara-dalana. Manoratra I Amy ao anatin’ny bolongana fifandraisan’izy ireo antsoina hoeDestinazione Paradiso fa satria niala tao Mexico nifindra monina tao Etazonia tamin’ny fomba tsy ara-dalana I Carlos tamin’ny fahazazany, dia ankehitriny misedra olona amin’ny fomba ara-dalana izy ka na ny fanambadiana natao aza tsy afaka mamaha ny olana akory.
“Hitanao, raha oharina amin’ny finoana ankapobeny (ny bolongana milaza IZANY dia ho tonga tsy ho ela), dia tsy ho mora ho an’ny olona tafiditra tao Amerika tamin’ny fomba tsy ara-dalana ny manitsy ny taratasy mahakasika azy ireo rehefa tafody any amin’ny taniny izy ary hangataka ny viza (visa) indray rehefa avy eo. Ary tsy ho voavaha olana amina fampakarana olom-pirenena Amerika ho vady fotsiny amin’izao izany rehetra izany. Ary amin’ny ankapobeny, ny heloka vitan’ny ireo tsy ampy taona dia hita mitongilana raha ampitahaina amn’ireo izay vitan’ireo olon-dehibe, eo amin’ny tontolon’ny fifindra-monina dia tsy misy dikany ny taona. Mahazo ny sazy mitovy ianao rehefa niditra antsokosoko amin’ny faha 8 taonanao na amin’ny faha-58.Ny tantaram-pifindra-monina an’I Carlos dia tsy mitranga irery, fa hita ao amin’ny lisitra mainty ANANKIROA ao amin’ny antontan-dalanan’ny fifindra-monina sy ny fizakana zom-pirenena ny taona 1996. Mitranga fa ny lalana dia manadino ny andalana sasany mahakasika indrindra ny zaza tsy ampy taona, fa ny masoivohon’ny firenena Amerikana ao Meksika (Mexique) kosa dia vao haingana no nanapa-kevitra ny hampihatra ny lalanany manokana ka hametraka ny fitovian-jo misy eo amin’ny zaza tsy ampy taona sy ny olon-dehibe.
Tamin’ny volana Octobra 2008, nivoaka ny didim-pitsarana ho an’I Carlos fa tsy mahazo miditra ao Etazonia amin’ny fomba ara-dalana intsony izy. Manoratra ramatoa vadiny:
“Eny, indrisy, niharitra fifandonana mahery vaika sy mampalahelo ireo taona maro niadianay ny fifindra-monina noho ny zava-misy ao amin’ny lalan’ny fifindra-monina. Tao aorian’ny 11 volana teo ho eo, asa kely Meksikana roa , vola dolara anarivony, fiara manidina iraisam-pirenena sivy, fanantenana sy nofy tsy misy fihafarana ary koa vavaka amin’ny taonina, ankehitriny fotsy ny eo am-pelatananay. Araka ny zava-mitranga ankehitriny, tsy afaka miditra ao Etazonia mandrakizay I Carlos, ary koa tsy hisy intsony ny fahafahana mangataka fanazavana. Izany foana mantsy no safidy azo atao, toy ny toe-javatra ratsy indrindra, kanefa moa izay no tantara tokana nisy taminay.”
Na dia eo aza izany, dia manoratra I Amy fa mitohy ny tolona.